China Model No: Sinoa fanamboarana sinoa fanaraha-maso Y81 Series Hydraul Scrap Metal Press Aluminium Baler milina ho an'ny Metal Press Recycling orinasa sy mpamatsy | Mampiray Top
Model No: Sinoa fanamboarana sinoa fanaraha-maso Y81 Series Hydraul Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine ho an'ny Metal Press Recycling
Ny Y81 Series hydraulic baler vy miaraka amina rafitra extruded mihidy, takelaka mitafy hery mahery ary fonony varavarana misy lelany fanapahana, izay mety manety volo kely kokoa ho kely kokoa ary koa amin'ny fanatanterahana mialoha. Ny milina tsirairay dia azo fehezina amin'ny tanana na ho azy.
Mihoatra ny 25+ taona niainana tamin'ny famokarana, manome namboarina mihoatra ny 3000+ mametraka drafitra fanodinana vy.
Toerana niandohana JIANGYIN, CHINA
MODELY Y81 Series
Fanerena hydraulic 100-3000 taonina
Bale habe 300 * 300 mm na Custom
Haben'ny efitrano 1200 * 600 * 700 mm na Custom
Fomba ivelany Mandrosoa bale mandroso bale mandroso bale
hetsika Fanaraha-maso Manual na PLC
Antsipirian'ny famokarana ：
Ny milina fanamafisam-peo vita amin'ny vy dia manana tombony tsara amin'ny indostrian'ny fanodinana vy. Amin'izao fotoana izao, ny tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana misy dia olana sedrain'ny firenena tsirairay avy. Na inona na inona firenena an-dàlam-pandrosoana na mandroso, ny fomba fanaingoana tsara indrindra dia lohahevitra mafana hatrany. Izahay dia mamolavola karazana milina vy vita amin'ny vy ho an'ny mpanjifanay mba hifaneraseran'ireo mpanjifanay amin'ny vy vy hihaonany amin'ny takian'ny mpanjifanay.
Ny baleram-by vy dia afaka mifampiraharaha amin'ny fomba mahomby amin'ny karazan-tsolika vy rehetra, fiharatra vy, ravina vy, alimika, varahina ary famoahana hafa manam-pahaizana voafintina ao anaty endrika mahitsizoro, silindrisy, octagonal ary endrika hafa mba hampihenana ny vidin'ny fitaterana sy ny fandoroana ary afaka manatsara ny hafainganan'ny lafaoro lehibe.
● Fiara mihodina, fandidiana malefaka ary tsy misy tabataba, haingam-pandeha haingam-pandeha, hery fitrohana lehibe, sakana tsy mora miparitaka.
● Ampiasao ny takelaka vy mahazatra sy ny haitao mandroso, ny faritra mekanika dia maharitra, tahan'ny tsy fahombiazana ambany ary androm-piainana maharitra.
● Ny rafitra mangatsiaka dia azo apetraka hanatsarana ny fizotran'ny fitaovana tsy tapaka ary hampihena ny tahan'ny tsy fahombiazana. Ny rafitra mangatsiaka dia azo zaraina amin'ny fampangatsiahana rano sy ny rivotra.
● Ny tombo-kase varingarina dia mandray ny peratra GRAI nafarana, izay misy fahombiazan'ny famehezana tsara sy fanoherana tsindry mafy.
● Fametrahana mora, dian-tongotra kely, tsy misy fototra, fototra, sns Fandidiana tsotra, azo esorina, maody mandeha ho azy.
● Ny fitrandrahana mangatsiaka dia tsy manova ny metaly ary manatsara ny tahan'ny fampiasana.
● Ny coefficient dia avo kokoa noho ny fonosana martsa nentim-paharazana, fonosana mekanika sns.
● Ny fibaikoana manual na PLC mandeha ho azy dia mora ampiasaina sy voatazona.
● Ny mpanjifa dia afaka misafidy herinaratra elektrika na milina mpamokatra herinaratra entin'ny diesel, ny milina mpamily diesel dia afaka manampy anao hahatratra metaly manindry finday.
● Ny milina fanodinam-by vy dia afaka manampy anao hamonjy asa, hanatsara ny fanarenana vy, hampiakatra ny vidin'ny fivarotana ary hanatsara ny tombom-barotra.
● Izy io dia afaka manampy anao hitahiry ny faritry ny toeram-piasana, mahasoa amin'ny fitantanana tranokala.
● Ny mpanjifa dia afaka manamboatra famaritana sy habe amin'ny fonosana mifanaraka amin'ny filany manokana amin'ny fitaterana na fitehirizana.
● Afaka manampy anao hampihena ny vidin'ny fitaterana izany, hanatsara ny fahaizanao miasa
Mombamomba ny milina vy vita amin'ny vy
Haben'ny efitrano (L × W) mm Bale habe (L × W) mm Hery (KW)
Ny milina Hydraulika Metal Metal Baler dia manome ny masinina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa ny SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sns. Nandritra ny 10 taona mahery.
Ny milina fanodinam-by vy dia be mpampiasa amin'ny indostria manaraka:
● Indostrian'ny fanodinana vy, ny milina fanodinam-by metaly azontsika dia afaka manamboatra ny vy vy ho lasa bales efa-joro,
● Indostrian'ny fanaparitahana fiara manapotika, ny milina fanodinam-by vy dia be mpampiasa amin'ny fanindriana ny vatan'ny fiara.
● Orinasa fananganana vy sy fandrendrehana vy, orinasa vy sasany na potika vy mandritra ny famokarana azo tsindriana.
● Indostrian'ny fitaovana. Ny vokatra vy sasany dia azo tsindriana amin'ny alàlan'ny masinina vy vy.
● Indostrian'ny fanodinana milina. Ny fonosana sy ny fametahana ny sombin-javatra, potipoti-javatra, vovoka ary fitaovana metaly hafa dia manampy betsaka amin'ny tontolon'ny atrikasa, fanodinana fako ary fampiasana ny olombelona.
Hampiasa fonosana horonantsary vita amin'ny fonosana sy fonosana hazo izahay hiarovana ny milina vy vy vy.
Jereo ny milina Hydre Metal Baler momba ny famerenana vy amin'ny vy!
Teo aloha: Model No: Sinoa fanamboarana sinoa fanaraha-maso Y83 Series Hydraulika Metal Chip Briquetting Press Machine ho an'ny Metal Recycling
Masinina Baler Aluminium
Model No: Fanaraha-maso mandeha ho azy ny famokarana sinoa ...
Model No: Sinoa Manamboatra Q91Y Series Hydra ...
Modely Tsia: Fanaraha-maso Manual Manamboatra Sinoa Y8 ...
Masinina vita amin'ny paosin-tsolika Baler Aluminium mitsivalana, Alligator Shear ho an'ny Mobile Digger, Hydraulika Baler / Aluminium afaka milina milina, Sheet Metal Baler, Copper Scrap Baler, Masinina vita amin'ny vy vovoka,